Nirefodrefotra ny basy tetsy Antanimena : nandriaka ny ra, jiolahy iray maty voatifitry ny polisy | NewsMada
Nirefodrefotra ny basy tetsy Antanimena : nandriaka ny ra, jiolahy iray maty voatifitry ny polisy
Par Taratra sur 02/12/2016
Sahotaka sy hatairana ny an’ny mpandalo sy mpitondra fiara tetsy Antanimena, omaly tolakandro. Nirefodrefotra ny basin’ny polisy nisambotra ireto jiolahy roa. Maty tsy tra-drano ny iray, raha azo sambo-belona kosa ilay faharoa.
Tao anatin’ny minitra vitsy monja nisehoan’ny tifitra ka nahafatesana lehilahy iray voalaza fa jiolahy teny Antanimena, tsy lavitra ny foiben’ny HVM, omaly, tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro teo. Voatifitra teo amin’ny lohany mihitsy izy io, ary nitsirara teo am-povoan’arabe. Ny iray namany kosa tratra sambo-belona. Nibaboka avy hatrany izy ity raha vao nahita ny iray voatifitra. Nanao tifi-danitra inefatra ireo polisy nanaparitahana ny olona.
Araka ny fanazavana azo, efa narahan’ny polisy nanao fanamiana sivily hatrany Behoririka ireo roa lahy ireo. Nandeha an-tongotra ireo ka raha vao nahatazana ny polisy, dia niakatra tao anaty taxi-be avy hatrany. Nanenjika ny polisy ka voasintona nivoaka ny iray, ary voatifitra ny iray. Saika hitsoaka ny faharoa, kanefa raha vao naheno ny poa-basy, nandohalika teo noho eo. Nilaza ny olona teny an-toerana fa raha handeha hitsoaka ilay faharoa mbola voatifitra ihany koa, ka tsy afa nihetsika intsony, ka hany heriny nibaboka.
“Tsy nampoizinay ny zava-nitranga. Voasintona tao anaty taxi-be ilay iray, ary niharan’ny totohondry, izay voatifitra avy hatrany”, hoy ny fitantaran’ny olona teny an-toerana nahita ity tranga ity. Niparitaka nitsoaka ny olona teny amin’ny manodidina. Nangadihady vetivety ny teo an-toerana raha vao naheno ny poa-basy. Samy nisahotaka nahita ity zava-niseho, ary tsy nahazo antoka raha polisy tokoa ireto nitifitra. Tonga teny amin’ity nisehoan’ny fitifirana tao anatin’ny fotoana fohy anefa ny 4×4 an’ny polisy naka ny razana sy ilay iray azo sambo-belona. Teo vao samy nahita fa polisy tokoa ireto nanambotra olon-dratsy niafara tamin’ny fitifirana ireto.
Tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy avy amin’ny tompon’andraikitry ny polisim-pirenena. Raha ny fantatra kosa anefa, jiolahy efa mpanao fanafihana mitam-piadiana ry zalahy ireo. Efa ny alatsinainy teo nitsongoan’ny polisy dia azy ireo. Nisy ny filazana fa nikasa hanafika eny amin’ny manodidina an’i Behoririka eny ireto jiolahy ireto. Misy namany hafa saingy tsy tratra ary mbola anatin’ny fikarohana azy ireo ny polisy.
Toe-javatra efa fahita ihany ny fitifirana jiolahy tahaka izao. Misy ny faly amin’ny tranga satria mihena indray ny isan’ny olon-dratsy. Eo koa anefa ireo mbola mametraka ahiahy raha tena jiolahy tokoa ity maty voatifitra na tsia. Efa hita ihany ny fisian’ny fianakaviana mitaraina fa tsy jiolahy ny havany maty notifirin’ny mpitandro filaminana. Tsy nisy tohiny ireny raharaha ireny, fa nangina ho azy teny.
Sarotra ny toe-draharaha, azo heverina ihany fa mety hamono koa ireo jiolahy rehefa sendra azy ireo. Fiarovan-tena, fandringanana, famonoana… hanasokajiana ny fihetsiky ny mpitandro filaminana?